November 12, 2020 - Padaethar
သေပြီးသားလူတစ်ယောက်က သင့်ကိုအိပ်မက်က တဆင့်ဆက်သွယ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ပုံစံ (၇) မျိုး
November 12, 2020 by Padaethar
သေပြီးသားလူတစ်ယောက်က သင့်ကိုအိပ်မက်က တဆင့်ဆက်သွယ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ပုံစံ (၇) မျိုး ကိုယ့်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲက ၊ အသိမိတ်ဆွေတွေထဲက တစ်ယောက်ယောက်သေဆုံးသွားပြီးတဲ့အခါ သူတို့ကို သတိရတဲ့ စိတ်ကတော်တော်နဲ့ မလျော့သွားပါဘူး။ ပြီးတော့ သေဆုံးပြီးတဲ့သူက အသက်ရှင်ကျန်ရစ်တဲ့ သူတွေကို အိပ်မက်ပေးပြီး ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားတတ်ကြတယ်လို့လည်း အယူအဆ ရှိကြပါတယ်။ တကယ်ရော အဲ့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးရှိပါ့မလား ဆိုတာကတော့ စဉ်းစားစရာပါပဲ။ ဘာပဲပြောပြော ဆုံးပါးသွားတဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကိုအိပ်မက်ကတဆင့် ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားလာရင် ဒီအချက်လေးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်တဲ့နော် …။ (၁) အိပ်မက်တဲ့ အကြောင်းအရာ အသေးစိတ်ကို မှတ်မိနေတယ်” မနက်နိုးလာတဲ့အချိန်မှာ အိပ်မက်မက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို မေ့သွားတတ်ကြပါတယ်။ မှတ်မိရင်တောင် ဇဝေဇ၀ါ ဖြစ်နေတုန်းပါ။ အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ သေဆုံးပြီးသား သူကိုလည်း အိမ်မက်မက်တယ်၊ အကြောင်းအရာ အသေးစိတ်ကိုလည်းမှတ်မိနေတယ်ဆိုရင် သူတို့တွေသင့်ကို တစ်ခုခုပြောချင်နေလို့ ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားနေတာကြောင့်ပဲ … Read more
မိန်းကလေးများအတွက်.. အန္တရာယ်ရှိသော ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ ကြက်တောင်ပံ (ဖြစ်ရပ်မှန်)
အလှအပကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ မမ….တို့ ရေ… ကြက်တောင်ပံကြော်ကို နေ့ စဉ်ရက်ဆက်စားသုံးခြင်းဟာ အမျိုးသမီးတွေအတွက်တကယ့် အန္တရာယ်တခုဆိုတာက်ို မျှဝေလိုက်တာပါ….ဒါကတော့ စင်ကာပူက အမျိုးတမီးတဦးရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် အကြောင်းလေးပါ။ မကြာသေးမီက အမျိုးတမီး တယောက် သူ့ ရဲ့ဗိုက်ထဲမှာ သွေးခဲလိုလို ပြည်တည်သလိုလိုိ အခဲတခု ဖြစ်ပြီး ကြီးကြီးလာတာကြောင့် ခွဲစိတ်ပြီး ထုတ်ပြစ်လိုက်ရတဲ့အထိဖြစ်သွားပါတယ်…. အဲဒီအခဲဟာ ခွဲစိတ်ပြိးကြည့်လိုက်တော့ မဲပုပ်နေတဲ့သွေးခဲကြီးပါတဲ့….သူမကတော့ ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်မှာ ပုံမှန်ပြန်ကောင်းလာမယ်လို့ ပဲ ထင်ခဲ့တာပေါ့… ဒါပေမယ့်.. သူထင်တာနဲ့ တတ်တတ်စင်အောင်လွဲခဲ့ပါ့တယ်…ခွဲစိတ်ထုတ်ပစ်ပြီး လအနည်းငယ်အကြာမှာ အရင်လိုပဲ ဗိုက်ထဲမှာ သွေးခဲလိုလို ပြည်ခဲလိုလို ပြန်ဖြစ်လာပြန်ရောတဲ့…. ဒုက္ခပါပဲနော်…သူလဲ အရမ်း စိတ် သောကရောက်ရတာပေါ့….ဒါနဲ့ သားဖွားမီးယပ်ပါရဂူ တယောက်ဆီ ချက်ချင်းသွားပြကြည့်တော့…ဆရာဝန်က သူမကို မေးခွန်းတခုမေးတယ်…. မေးခွန်းက သူမအတွက်တော်တော်ကိုထူးဆန်းနေတယ်…..ကြက်တောင်ပံကို နေ … Read more
သိုးစော်နံနေတဲ့ အဆီ တစ်ထပ် အသားတစ်ထပ် ခန္ဒာကိုယ်ကြီး
မိန်းကလေးတွေ မကြိုက်တဲ့ အမှန်တရား ….နည်းနည်းတော့ ခါးမယ် ဖတ်ကြည့်…
ကိုယ့်လက် (သို့)ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက် ကောင်းဖြစ်မဖြစ် အရမ်းမှန်တဲ့ အိမ်ထောင်ဘက်ကောင်း လက္ခဏာ ကြည့်ရန်… ကိုယ့်လက် (သို့)ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက် ကောင်းဖြစ်မဖြစ် လက္ခဏာ ကြည့်ရန် အိမ်ထောင်ဖက် ကောင်း လက္ခဏာ အဲဒီလို နှလုးံ လမ်းကြောင်း လေးက လက်ညှိုးအောက် ကြာသာပတေး ခုံကိုသွားနေမယ် ….. အတက်ကလေး ကလည်း လက်ညှိုး နဲ့ လက်ခလယ် ကြားကို အခွလေး ဖြစ်နေမယ်ဆ်ိုရင်….. အဲဒီသူဟာ အိမ်ထောင်ရေး မှာယဉ်ကျေးမယ်…. သူ့ ကို လည်းလေးစားအောင်နေမယ်… ဘက်ညီမယ် သံယောဇဉ် ကြီးပြီး အ်ိမ်ထောင် သာယာအောင် ဖန်င်္တီးမယ်…. ကိုယ့် လက် ချစ်သူ အိမ်ထောင်ဖက် လက်ကို စစ်ကြည့် နိုင်ပါတယ်….။ ခပ်ဆင်ဆင်တွေ အများကြီး မို့မသေချာရင် … Read more
ဆီးချို ရောဂါ ရှိနေကြောင်းသိနိုင်တဲ့ လူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေ
ဆီးချို ရောဂါ ရှိနေကြောင်းသိနိုင်တဲ့ လူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေ ဒါကြောင့် ဆီးချို ရောဂါ ကို အသံတိတ် လူသတ်သမား (silent killer) လို့ခေါ်ဝေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆီးချို သွေးချို ရောဂါ ဆိုတာ ကြောက်မက်ဖွယ်ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ လူတော်တော်များများကလည်း ကိုယ့်မှာ ဆီးချို ရောဂါ ရှိလို့ ရှိနေမှန်းတောင် မသိကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဆီးချို ရောဂါ ကို အသံတိတ် လူသတ်သမား (silent killer) လို့ခေါ်ဝေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆီးချို ရောဂါ ကို စဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာ ထိန်းချုပ်ကုသနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ လွှတ်ထားမယ်ဆိုရင် နှလုံးရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါနဲ့ အမြင်အာရုံ ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ကို ကြုံရနိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာဖော်ပြထားတာကတော့ ဆီးချို ရောဂါ ရှိနေကြောင်း သိနိုင်တဲ့ လက္ခဏာ လေးတွေပါပဲ။ ၁။ ဆီး … Read more
ပါးစပ်နာ၊ ပါးစောင်နာ ရောဂါ
လောကမှာ ရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့ အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ သေခြင်းတရား ကို ဘယ်သူမှ မရှောင်လွှဲနိုင်ဘူး။ ဆင်းရဲ ခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်းစတဲ့ လောကဓံ အနိမ့်အမြင့်တွေ ကိုလည်း ရှောင်လွှဲလို့မရဘူး။ ဆင်းရဲခြင်း ဆိုတဲ့ နေရာမှာ စိတ် ဆင်းရဲတာ၊ ကိုယ် ဆင်းရဲ တာ နှစ်ခုလုံးပါတယ်။အာရုံငါးပါးခံစားနိုင်တဲ့ ခန္ဓကိုယ်ကြီး ကိုက ဝေဒနာ တွေခံ စားနိုင်တယ်။ ဖြစ်၊ တည်၊ ပျက်သဘောအရ ကိုယ်ဖြစ်မယ်၊ တည်ရှိမယ်၊ ပျက်စီးမယ် ရှောင်လွှဲလို့မရနိုင်တဲ့အရာတွေဘဲ။ အဲ့ဒီလိုဘဲ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီး ကလည်း နေရာတိုင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ ပိုးမွှား တွေရန်က ရှောင်လွှဲလို့မရဘူး။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းရှုရှိုက်နေတဲ့လေထဲမှာပါနေတဲ့ ပိုးမွှား တွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ဝင်ရောက်နေပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေမှသာ လက္ခဏာပြကြတယ်။ တော်တော်များများကို ခန္ဓာကိုယ် ကတိုက်ခိုက်ပြီး ဖြစ်နေတော့ဝင်မှန်းတောင်မသိလိုက်ကြဘူး။ နာတယ်၊ ကျင်တယ်၊ အနေရခက်တယ်ဆိုမှသာ … Read more